Mareykanka soo somaliya ugu deeqaya milaayiin dollar | Raascawad
Mareykanka soo somaliya ugu deeqaya milaayiin dollar
New yorka(Raascawad Media)_Dowladda mareykanka ayaa ku dhawaaqday in dalal ay ku jirto somaliya ay ugu yabooheysay lacag gaareysa 575$ milyan oo dollar oo dheeraad si wax looga dadka ay saameynta ku yeelatay dhinaca abaaraha
Sanduuqa ayaa carabaabay dalalka loogu tala galay kaalamada oo ay kamid yihiin, Koonfurta Suudaan, Yemen, Soomaaliya, iyo Nigeria oo sanadihii ugu danbeeyay ay ka jireen Abaaro xoogan.
Hay’adda USAID ayaa tilmaamtay in ujeedka bixinta lacagta uu yahay in kaalmo beni’adanimo ay helaan Malaayin shacab ah kuwaa oo ku nool dalalka ay abaaraha ka jiraan.
Mark Green oo ah Madaxa USAID ayaa ka shaaciyay deeqdaan shirka Golaha guud ee QM oo ka soconaya magaalada New-York, halkaa oo ay ku kulansan yihiin madax aad u fara badan.
Mr. Mark ayaa hoosta ka xariiqay in gargaarka beni’adanimo ee la siinayo dadka ku dhibataaysan dalalka ay ku jirto Soomaaliya uu yahay mid lagu doonayo in wax looga qabto dhibaatada nololeed, si nolosha dadkaasi ay mar kale dib ugu soo kobacdo.
Yabooha cusub ee Hay’adda USAID ayaa ku soo aaday xilli QM ay wali sheegayso in ay jirto saameynta abaarta ku dhufatay qaybo kamid ah dalka Soomaaliya, lona baahan yahay in la sii xoojiyo taageerada la siinayo dadka ay aabraha saaneeyeen.